Mofomamy manangona | Bezzia
Maria vazquez | 01/06/2021 10:00 | Nohavaozina amin'ny 29/05/2021 22:53 | Salady sy legioma
ny Bokin'i Yotam Ottolenghi ry zareo no tiako indrindra raha mitady aingam-panahy. Indraindray aho manaraka ny resin'izy ireo amin'ilay taratasy, saingy matetika no ampifanarahiko izy ireo mba hamoronana kinova tsotra kokoa na mifanaraka amin'ny pantry ahy. Ohatra iray amin'izany ity mofomamy kobalasy ity.
El Cauliflower mofomamy miditra amin'ny maso. Mofo tena tsotra ny manamboatra azy ary tonga lafatra mba hanompoana ny sakafo atoandro sy ny sakafo hariva, miaraka amin'ny a salady maitso. Azonao atao koa ny manomana azy mialoha ary manolotra azy mafana na mangatsiaka, araka ny itiavanao azy!
Ny kinova am-boky dia avo roa heny ny vola nampiasako, tonga lafatra amin'ny lapoaly 15-inch ary servisy malala-tanana efatra. Ankoatr'izay, ny fomba fahandro tany am-boalohany dia mampiditra akora sasantsasany izay nosoloiko ho an'ny hafa na nesoriko. Mbola valiny ihany ny valiny. Andramo izany!
1 Akora (ho an'ny bobongolo 15 cm)
Akora (ho an'ny bobongolo 15 cm)
260 g. soflera
2 tablespoons menaka oliva virjiny fanampiny
Rosemary 1/2 sotrokely, voatetika
Atody lehibe 3
60 g. lafarinina varimbazaha
1/2 vovo-pisakafoanana sotrokely
Kotsirety 1/3 sotrokely
75 g ny fromazy Parmesan grated
Voasary mainty mba hanandrana
Dibera hamonoana ny lasitra
Voa 2 sotro ny sotro fotsy
Afanaina hatramin'ny 180ºC ny lafaoro, miaraka amin'ny hafanana ambony sy ambany.
Diovy ny cauliflower ary saraho roa. Asio vilany misy rano sy sira kely hafanaina ary, rehefa mahandro, andraho mandritra ny 15 minitra ny cauliflower. Avelao eo amin'ny saringan mba hamoahana ny rano rehetra sy ho maina.
Raha mahandro ny ampongabemaso manapaka peratra tongolo efatra handravahana ny mofomamy ary tetehina madinika ny ambiny, mba ho hita eo amin'ny mofomamy izy ireo.
Afanaina ao anaty fonosana ny menaka oliva amin'ny hafanana antonony ary poach ny tongolo mandritra ny 10 minitra. Avy eo, arotsaho ilay rosemary, andrahoy mandritra ny roa minitra ary avelao hanafaka azy amin'ny hafanana.
Rehefa miakatra ny hafanana, afangaro ao anaty vilia ny akora maina: lafarinina, turmerika, masirasira an'ny mpanjaka, sira sy dipay.
Avy eo, kapohio ao anaty vilia ny atody. Raha vao nokapohina dia ampio ny tongolo, akora maina ary fromazy ary afangaro tsara.
Farany, ampio ny ampongabongo.
Omano ny bobongolo azo esorina 15cm. Soraty amin'ny taratasy mofomamy ny fotony ary hosory menaka ny rindrina. dia afafazo ny masomboly sesame manaraka ny rindrin'ny lasitra.
Araraka ao anaty lasitra ny fangaro ankehitriny fa efa vonona izy ary voaravaka amin'ireo peratra tongolo voatokana.
Ento any amin'ny lafaoro ary mahandro mandritra ny 45 minitra na mandra-pilahatra. Avy eo esory ao anaty lafaoro izy, avelao izy hiala sasatra mandritra ny dimy minitra ary esory.
Arotsaho miaraka amin'ny salady ny mofomamy misy cauliflower ary mankafiza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » Salady sy legioma » Cauliflower mofomamy
Fahadisoana haingon-trano matetika ataontsika